सुनको मूल्य घट्याे, कतिमा हुदैछ कारोबार ? – Gandaki Chhadke
सुनको मूल्य घट्याे, कतिमा हुदैछ कारोबार ?
काठमाडौं– साताको अन्तिम दिन शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएकोमा शुक्रबार २०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९१ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको हो ।
यो पनि – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम ११९ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्री दर १२० रुपैयाँ ३० पैसा कायम गरेको छ ।
ट्याक्सीले लिने ‘डेढी’कै शैलीमा उपभोक्ता ठगी गर्दै पठाओ